Maitiro eKushandura Chikwata Chako Kushanda Kubva Kumba - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Shanda kubva Kumba
Maitiro Ekuchinjisa Chikwata Chako Kushanda Kubva Kumba
Huwandu hwevanhu vanoshanda mumabasa ari kure hwakawedzera mumakumi emakore apfuura. Vazhinji vashandirwi vaona mamwe mabhenefiti emabasa madiki. Kufara uye kugutsikana kwemushandi zvakaratidza kuvandudzika kukuru kana achishanda ari kure.
Nguva dzazvino dzisina kumboitika dzachinja mashandiro anoita vanhu zvachose. Kushanda kure ndiyo nyowani nyowani, uye iri kuramba iri covid 19 denda rataridza kuti iyi ndiyo nzira yekuchinja. Nemikana yekudzikira, zvakakosha kutungamira timu yako ku basa pamba zvinobudirira. Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nehurongwa hunovimbisa kugona uye kusimudzira manejimendi wenguva. Nguva idzi hadzina kuchengetedzeka, uye unofanira kuenda ku basa pamba nhasi nenjodzi yekuparadzira hutachiona.
Shanda kubva kumba ine zvinhu zvakawanda, uye munhu wese ari mukambani yako anobatsirwa nazvo kana zvanyatsoitwa.
Heano maitiro aunogona kuchinjisa timu yako kuenda basa pamba.
Isa Pasi Rinoshanda Basa Kubva Kumba Strategic Yako Matimu
Usati watanga kuchinjisa timu yako basa pamba, zvakakosha kugadzira mutemo webasa uri kure. Izvi, zvakadzama, zvichavhara zvese zvirevo uye mamiriro anofanirwa kusangana uchishanda kure. Isa miganhu uye zvinobudirira. Izvi zvakakosha sezvo zvichitsanangura maawa ekushanda, tsika dzebasa, Software kushandiswa, uye zvibereko zvinotarisirwa. Inobatsira mukuseta bhaa yechikwata chako, inoda kutungamirwa nguva dzose. Pinda muhurukuro nevatungamiriri vekambani, vatengesi, uye vanobatana. Dhirowa a basa pamba mutemo unozoshanda kune kambani.
Gadziridza yako Hiring Policies
Nhanho inotevera yekutungamira timu yako basa pamba ndeye kuvandudza marongero ako ekubhadhara. Shanda kubva kumba ine seti yayo ye matambudziko, uye iwe unofanirwa kuve uine yakatarwa yekuhaya mutemo kune vako vashandi kuitira kuti zvaunotarisira zviitwe. Unyanzvi hwekutarisa ndehwekuzvikurudzira wega, hunyanzvi hwekutaurirana, kushanda nesimba kumhanya, nezvimwe izvo zvinowedzera kukosha kuchikwata chako. Bhadhara chete avo vanhu vanogona kushanda zvinobudirira vari kure uye usanonoka mukati menguva dzebasa.
Chengetedza Basa Rinoshanda Kubva Kumidziyo Yekumba
Kuti unyatso shandura timu yako basa pamba, isa mari mune zvakanaka basa pamba zvishandiso. Tarisa pane dzakasiyana sarudzo uye dhirowa runyoro rwese softwares inodiwa nechikwata chako. Dhirowa rondedzero yezvaunoda uye nyora pasi nhamba yevanhu vari muboka rako. Shanda nemazvo kuti upe mukana kune imwe neimwe nhengo yechikwata chako kuitira kuti kufambiswa kwebasa kufambiswe. Izvo zvinodiwawo kuitisa masesisheni anoratidza mashandisiro eaya masoftware uye kushanda zvakanaka. Zvishandiso izvi zvinosanganisira project management zvishandiso, zvishandiso zvekubatana, gore basa, zvishandiso zvevhidhiyo musangano, uye nguva yekutevera softwares. Unogona kutaura vakakwanisa IT vanopa rubatsiro muToronto uye tora mhinduro dzakanakisa.
Kurudzira Chikwata Chako Kuti Chitange
Nguva dzazvino dzinogona kunetsa, uye kuchinja kune imwe modhi yebasa kunogona kutyisa. Semutungamiri wechikwata, yeuka kutungamira timu yako uye kuvakurudzira kuti vatange. Gadza muenzaniso wakanaka uye uvatungamire kuburikidza neshanduko. Iyo yakanaka yekushanda uye yekurwisa zano inogona kuenda kure nzira yekugadzirwa kwechikwata chako. Rangarira nguva dzose kuti urambe uchigadzirisa timu yako nekuvandudza kutsva uye nekumisikidza sisitimu yekutaurirana kwakanaka. Nyatso gadza zvinangwa zvako nezvinangwa kuti zviitwe uye ramba uchikurudzira. Shanduko dzinogona kazhinji kukanganisa maitiro, saka unofanirwa kubatsira nhengo dzeboka rako. Gadzira nzira yekugadzirisa mazuva ebasa nemaawa. Izvo zvakakosha kuratidza nguva yekuzorora uye nzira dzekudzivirira kusagadzikana kwescreen.
Chengetedza Yako Kambani Tsika
Chinhu chakakosha kuita kushandura timu yako basa pamba ndiko kugadzira tsika yekambani yakanaka. Tsika yekambani inogona kuve chikonzero chekugutsikana kwevashandi, uye kugadzirwa sezvo kuenda kure kunounza yayo seti ye matambudziko. Ita chimwe chinhu kuitira kuti tsika yekambani yako isatambura. Gadzira mamiriro akanaka kune vese vashandi vako uye chengetedza kutaurirana kunogutsa kugutsa munhu wese mukambani. Iwe unogona zvakare kugadzira zvikamu zvinowedzera hunyanzvi uye hunyanzvi hwekugadzirisa matambudziko. Mari yakachengetedzwa kubva mukushanda muhofisi inogona kushandiswa kupa zvimwe zvivakwa kuvashandi vako. Nguva dzose musangano wevhidhiyo, kuongororwa, makadhi ezvipo, husiku hwekutaura husiku, nezvimwe inogona kunge iri nzira yakanaka kwazvo yekuona kuti basa uye mafaro anotarisirwa.
Gadzira Mazuva ese Ekutarisa-Maitiro Ekutarisira Vako Vari Kure Vashandi
Gadzira yakajairwa yekutaura sisitimu kuburikidza ne-on-one mafoni nevashandi vako kuti unyatso kuwedzera kubatirana kwechikwata chako. Zvakare, gadzira chirongwa chekugara uchitaura zvinovanetsa newe, zvinozovabatsira kugutsikana uye kugona pabasa ravo. Remote basa rinouya ne set ye matambudziko kune mamaneja nekuvadzidzisa zvakakosha zvikuru kuti zvinhu zvifambe mushe.
Ipa Akawanda Ekutaurirana Tekinoroji Sarudzo kune Vako Vese Vari Kure Vashandi
Ndichiri kushandura kuenda basa pamba, zvakakosha kuti uzive kuti email yega haigone kushanda nemazvo pakutaurirana. Unoda zvimwe zvivakwa zvakawanda zvinosanganisira videoconferencing. Izvi zvinobvumira chiso nechiso kutaurirana uye kuderedza pfungwa yekuzviparadzanisa nevamwe. Vhidhiyo inogona kubatsira kuziva zvinoonekwa uye kuve neruzivo rwakawanda nezve izvo vashandi vako vanonzwa.
Kurudzira Kutsigira Kwemanzwiro uye Kugovana Mikana.
Nguva dzazvino dzakaoma, uye kujairana nazvo basa pamba inogona kuratidza kunetsa kune vashandi vazhinji. Gadzira nzvimbo yakanaka inopa kurudziro uye tsigiro yemanzwiro kune wese mukambani yako. Zvisina pamutemo misangano yekambani inogona kubatsira kubuda kudzivirira chero kushushikana kwepfungwa uye kumutsiridza munhu wese anokushandira.
Ronga misangano yenguva dzose kwaunogona kutaura pachena nezvematambudziko uye matambudziko of basa pamba. Tsigiro yemanzwiro nekurudziro zvinoenda kure mukutsanangura kugadzirwa kwekambani yako, uye munhu wese anogona kushandisa ruoko rwekubatsira munguva dzino dzekutambudzika. Zvakare, rangarira kusapfuudza vashandi vako nebasa rakawedzerwa. Izvo zvakakosha kuenzanisa maawa ekushanda uye mafaro epamba kubata nekunetsekana kusangana nenguva dzakatarwa.
The COVID-19 denda rakonzera kuchinja kwemaitiro ebasa. Shanda kubva kumba ndiyo itsva yakajairika. Tevedza zano iri uye zvinobudirira tungamira timu yako kune shanduko kuenda basa pamba.